-मोहनराज बराल - विश्व शेयर बजारका बादशाहले कहिले किने पहिलो शेयर? मैले नब्बेको दशकको बिचमा डेक्सटर सुज कम्पनी चार सय मिलियन डलर हालेर किने तर त्यो जिरोमा गयो।तर मैले त्यहि पैसा खर्च गरेर बार्क्शरको स्टक लिए त्यो जुन अहिले करिब चारसय विलियन डलर भएकोछ।मैले यसरी लिएका ...
सन्जोग आचार्य, न्युयोर्क -
बुद्ध जयन्ती र गणतन्त्र दिवसको अबसरमा न्युयोर्कमा आयोजना गरिएको नेपाल डे परेडमा हजारौंको संख्यामा नेपालीको उत्साहप्रद सहभागिताले न्युयोर्कमा ‘मिनी नेपाल’ को परिकल्पना गर्न थालएको छ। नेपाल डे परेडमा स्वस्फूर्त रुपमा उपस्थित नेपाली समुदाय, संघ संस्थाले आइतवार अमेरिकामा नेपालीको शिर सगरमाथाजस्तै उच्च बनाएका छन्। नेपाली समुदाय राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित भई ‘वल्र्ड क्यापिटल’ न्युयोर्कको म्यानह्याटनलाई नेपालमय बनाइदिएका थिए। राष्ट्रिय पोशाक, झण्डा, झाँकीसहित उपस्थित भई नेपालीले नेपालको धार्मिक, सास्कृति र पर्यटकीय महत्वलाई उजागर गरिरहेका थिए । म्यानह्याटनको मेडिसन एभिन्यूमा हजारौं नेपाली उर्लिएको देखेर न्युयोर्क घुम्न आएका पर्यटक र म्यानह्याटवासी पनि अचम्मित भएका थिए। निकै लामो र ठूलो र्यालीको कारण न्युयोर्कमा ट्राफिक ब्यबस्थापनमा कठिनाई भइरहेको थियो। तर, पनि न्युयोर्क प्रहरीले ब्यबस्थित ढंगले ट्राफिक ब्यबस्थापन र सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। म्यानह्याटनको म्याडिशन एभिन्यूमा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो।
किशन गौतम, सोल, जेठ ९ -
फडिन्द्र भट्टराई, लन्डन, जेठ ९ -
नयाँदिल्ली, जेठ ९ -
यहाँस्थित साउथ एशियन युनिभर्सिटीको आयोजनामा ‘दक्षिण एशियामा नेपाल’ विषयक कविता महोत्सव आइतबार सम्पन्न भएको छ। विश्वविद्यालयको सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परियोजनाले आयोजना गरेको एकदिवसीय महोत्सवमा सहभागीताका निम्ति संगीत नाट्य एकेडेमीका कुलपति एवं कवि सरुभक्त र प्राध्यापक एवं लेखक अभि सुवेदी नयाँदिल्ली पुगेका थिए।
हेमन्त काफ्ले, सिड्नी, जेठ ८ -
सेतोपाटी संवाददाता, सिड्नी, जेठ ८ -
डा. नम्रता पाण्डे -
राष्ट्र र मुलुकलाई झन भन्दा झन अन्यौलता र गरिबीमा धकेल्ने जिम्मेवारी तिनैलाई जान्छ जसले आफ्नो जीवन नै दुइ कौडीको कोडा -कचेरामा राष्ट्रको सार्वभौम माथि खेलबाड गरेका छन्। क्याक्टसका झाडी हुन् तिनीहरु जसलाई टाढाबाट देख्दा राम्रो लाग्छ तर नजिक जादा छोए काँडा बिझ्छ ,न छुन सकिन्छ, न भित्र सजाउन सकिन्छ।
सेतोपाटी संवाददाता, सिड्नी, जेठ ७ -
कोम खत्री -
दुःख छ तर दुःख खपेर, सहेर एकदिन सुख पाउने चाहनाका साथ आएका विद्यार्थीहरूले आज सफलता पाएका अनेकौं कथाहरू पनि छन् । जति पनि आज समाजमा सफल भएर उभिएका छन् तिनले पनि शुरुवाती दिनमा त्यस्तै दुःख भोगेका थिए । फरक त मात्र मानसिक इच्छाशक्ति र दृढ संकल्पले पारेको हो। विस्तृतमा
कोरियाको अध्यागमन विभागद्वारा भिसाका केही नियम परिवर्तन
सोल, जेठ ७ (सेतोपाटी) -
यही मे २७ तारिख देखि लागू हुनेगरी कोरियाको अध्यागमन विभागले भिसाका केही नियम परिवर्तन गरेको छ।परिबर्तित नियमानुसार प्रवासी मजदुरले बोनस भिसा आफ्नो भिसा अबधि समाप्त हुनुभन्दा ४ महिना अगाडि नै थप्न पाउने भएका छन्। यसभन्दा पहिला २ महिना अगाडि मात्र थप्न पाउने नियम थियो।
सेतोपाटी संवाददाता -
अमेरिकाको न्यूयोर्क शहर स्थित टाइम स्क्वायरमा बुधबार अपरान्ह एक चालकले पर्यटकहरुको भिडमा कार कुदाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने २२ जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा महिला भएको न्युयोर्क प्रहरिले जनाएको छ। न्यूयोर्क शहरको फायर डिपार्टमेन्टका अनुसार २६ बर्षिय कार चालकले पर्यटकहरु हिडिरहेको पेटिमा कार चडाएर यो दुर्घटना गराएको थियो। कार चालक अमेरिकन नागरिक भएको र अमेरिकी नौसेना भेट्रान भएको प्रहरिले जनाएको छ। कार चालकलाई प्रहरिले नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गरिरहेको छ।